ဘွဲ့စာတမ်း, မဟာစာတမ်း, သက်တမ်းစက္ကူ | ယခု papernerds ရေးပါ
Ghostwriting ။ အကြံပေး။ ဘာသာပြန်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများကို ၁၈ နှစ်ကျော်စာရေးသားရန်ကူညီပေးခဲ့သည်
ဘွဲ့ , မဟာစာတမ်းများ , အိမ်စာ
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်သင်၏အလွန်အမင်းလျှို့ဝှက်, bespoke တ ဦး တည်းကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်
သင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးပို့လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်အထိအဆင့် ၃ နှင့် ၄ ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။
ကျနော်တို့စာတမ်းသက်တမ်းစာတမ်းများ, ဘွဲ့စာတမ်းများ, မာစတာစာတမ်းများ, တင်ပြချက်များနှင့်ပိုပြီး။
Uber မျိုး ၃၀ မျိုး အလုပ်၏
600 ထက်ပို ဘာသာရပ်များ
ပစ္စည်းပို့ရန်အချိန်သည် -7ရက်
ပစ္စည်းပို့ရန်အချိန်သည် - 14 ရက်
ပစ္စည်းပို့ရန်အချိန်သည် - 21 ရက်
Papernerds ကသင့်ကိုတစ်ခုတည်းမပေးနိုင်ပါ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးဌာန မင်းအတွက် အိမ်အလုပ်, ဘွဲ့စာတမ်း သို့မဟုတ် စာတမ်းကျွမ်းကျင်ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်း အတွေ့အကြုံရှိအယ်ဒီတာတစ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရေးအသားဝန်ဆောင်မှု ရှိခြင်း။
plagiarism မရှိပါ - သာထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းများ။
သင်၏အမှာစာမချမှီသင်၏မေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာများသည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများဖြစ်သည် ပညာရှင်များ နှင့်အထူးကုဒေသများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကထိက။
တိုက်ရိုက် & အမြန်ဆက်သွယ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောကတိကဝတ်များနှင့်သင်အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိသည် ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည် Papernerds အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သမ္မာသတိ papernerds များအတွက်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်ပါတယ်။ encrypt နှင့်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေးအပြင်ကျနော်တို့ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာ။
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်သင်အကူအညီလိုပါသလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိသောအဖွဲ့သည်ငါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြံဥာဏ်များပေးမည် ဘာသာရပ်များနှင့်ဘာသာစကားများ.
သငျသညျ Papernerds ၏သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်အပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးလမ်းညွှန်ချက်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာမှ။ plagiarism မရှိပါအကျိုးဆက်များ။
သိပ္ပံဆိုင်ရာအလုပ်တိုင်းသည်စာရေးသူနှင့်ညှိနှိုင်းပြီးဒုတိယပညာရှင်တစ် ဦး ၏စာမေးပွဲဖြစ်သည်။ Plagiarism software ကိုစစ်ဆေးသည် ထူးခြားမှု.
Papernerds ရှိလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်သည်စာကိုရေးသားရမည့်paperရိယာ၊ စာတမ်း၊ ဘွဲ့၊ မဟာစာတမ်းနှင့်စာမျက်နှာများ၊ ကိုးကားစသည်ဖြင့်မည်သည့်အလုပ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ထို့ကြောင့်နှုန်းထားကုန်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျစွာထုတ်ပြန်ရန်ခက်ခဲသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေသင်တစ် ဦး ရနိုင်သည် non-binding တောင်းဆိုမှုကို အစုတခုသို့မဟုတ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစီစဉ်ပါမေးခွန်းများအားလုံးကို ကြိုတင်၍ ရှင်းလင်းရန်။
၄ င်းတို့အားလုံးသည်မူတည်သည်။ အလုပ်အမျိုးအစားနှင့်စာပေသုတေသန၏နက်ရှိုင်းမှုအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာများကလုပ်ဆောင်နိုင်သည် 7-31 ရက် လိုအပ်တယ် စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာပါသောစာတမ်းတစ်စောင်ကိုခုနစ်ရက်အတွင်းရေးသားနိုင်သော်လည်းစာမျက်နှာ ၆၀ ပါသောမာစတာစာတမ်းသည်များစွာကြာပါသည်။
papernerds သည်ပညာရပ်နယ်ပယ်များစွာမှအစစ်အမှန်စာရေးဆရာများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သောကြောင့်အထူးသဖြင့်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အသေးစိတ်အချိန်ဇယားကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ကျိုးနပ်ပါသည်။ စုံစမ်းရေး ကယ်ရန်။
အချိန်ကာလပေါ် မူတည်၍ တစ် ဦး ချင်းစီအစီအစဉ်ကိုဤနေရာတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Papernerds တွင်သင်၏သခင်စာတမ်းအတွက်အရစ်ကျပေးဆပ်ရန်ရွေးစရာရှိသည်။ ငါတို့ပျော်တယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးပို့နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေပေးချေမှု စီစဉ်သည်။
သို့သော်၊ စာရေးသူသည်သင်၏အလုပ်ကိုအပြည့်အဝပေးပြီးမှသာအချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူကသူ့ဝင်ငွေရရှိဖို့ကြားထဲမှာအခြားတာ ၀ န်တွေကိုလက်ခံရလိမ့်မယ်။
ငါ papernerds နှင့်အတူဘာအာမခံချက်ရှိသနည်း
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများမှမည်သည့်အလုပ်မျိုးကိုမဆိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည် ကထိက, သုတေသီ သို့မဟုတ် အယ်ဒီတာများ စာဖြင့်ရေးသားပြီးတော့ plagiarism စစ်ဆေး check လုပ်ထားသည်။
ထို့အပြင်သင်အပ်နှင်းထားသောအလုပ်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာပေများအတွက်မည်သည့်နေ့ရက်တွင်မဆိုအသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာမခံပါတယ် 100% သမ္မာသတိနှင့်အရည်အသွေးမင်းကျေနပ်ပြီ သငျသညျကျေနပ်သည်အထိငါတို့တိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်လော့။
ငါတို့မှာaဖောက်သည်ထောက်ခံမှုစာမေးပွဲ၊ ဘွဲ့၊ မဟာစာတမ်းစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သောယေဘူယျမေးခွန်းများသင်မည်သူဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အစကန ဦး ဆက်သွယ်မှုရှိပါကသင့်အားခန့်ထားသည့်ကထိက၊ ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သုတေသီလည်းသင်နှင့်အတူရှိနေလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဤမေးခွန်းကိုလည်းအမျိုးအစား, နယ်ပယ်နှင့်ဘာသာရပ်onရိယာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ထပ်မံလိုအပ်ချက်များ (ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်များ၊ စစ်တမ်းများစသဖြင့်)
သင်၏တာ ၀ န်ရှိသူကသင်မည်သည့်ပစ္စည်းများလိုအပ်သည်ကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောပြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာရေးဘ ၀ ၏ကဏ္ areas အားလုံးတွင်သင့်အားကူညီသည်။
စာရေးသူ အိမ်စာ, ဘွဲ့, မဟာစာတမ်းများ, ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းများ နှင့်
ပံ့ပိုးမှု ရေးသားခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများ ပညာရေးဆိုင်ရာစာသားများ, Formatting, ကိုးကားကိုးကားချက်များ
ghostwriting နှင့် papernerds နှင့်ပတ်သက်သောအခြားမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်တွေ့နိုင်သည် မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများအပိုင်း.
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဖောက်သည်များထံမှမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ (သို့) အမှာစာအသစ်များကိုသင်၏မန်နေဂျာထံတိုက်ရိုက်ပေးပို့ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်စည်းကမ်းချက်များ (https://papernerds.de/AGBs/) နှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးကြေငြာချက် (https://papernerds.de/datenschutzerklarung/) ကိုဖတ်ရှုပြီးလက်ခံခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ဒေတာကိုငါတို့နှင့်အတူရှိလိမ့်မည် တင်းကြပ်စွာလျှို့ဝှက် ကုသ! အားလုံးအလုပ်အမည်ဝှက်ပြုမိသည်။ “ တောင်းဆိုခြင်းမရှိဘဲတောင်းဆိုခြင်း” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပေးပါမည် အချက်အလက်များအားကာကွယ်ခြင်း။